Ethiopia: Kacdoonadii ka taagnaa dhulka ismaamulka Somalilda oo khasaare balaadhan laga soo sheegayo magalada Diridhabe | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Ethiopia: Kacdoonadii ka taagnaa dhulka ismaamulka Somalilda oo khasaare balaadhan laga soo sheegayo magalada Diridhabe
Wararkii u danbeeyay ee ka imanaya magaalada Diridhabe ayaa sheegaya in khasaarahii shalay ka dhacay magalaada Diridhabe u ahaa mid aad u baxaad balaadhan iyadoo dhamaan inta badan gacanta la mariyey goobahii gancsiga dadka somalidu ku laahaayeen magaladaasi. Sidoo kale waxa la bar tilmaamansayey guryaha ay deganyahiin dadka somaliladi ahi iyadoo ilaa hada la xaqiijiyey in 13 guri gebi ahaanba dab la qabadsiiyey oo ilaa sedex gurina la sheegay inay ku dhinteen dadkii ku jiray.
Wararku sidey xaqiijinayaan guri waxa ku dhintay 8 qof oo reer Djibouti ah oo la filayo inay ahaayeen dadkii u soo xagaa baxay magalada, halka laba guri oo kalana laga soo saray midkiiba 4 dumar ah oo ku dhex gubtay. Tirada dhimashada dhinaca Somalida ayaa la xaqiijiyey inay tahay 16 qof ilaa hada inta la ogyahay.
Weerarada ayaa wax ka danbeeyay dadka qoowmiyada oromada ee degan diridhabe iyo nawaxaagideeda, iyadoo wararku sheegayaan inay buuraha ku hareeraysayn ay ka yimaadeen koox diyaarsan oo ku hubaysan budad iy faashash ama baangado oo ay magaalada soo galeen.
Dowlada dhexe ee itoobiya Ayaan iyadu gurmad culus oo ciidamado badan ah ka gelin hakintii rabshadahii shalay ka dhacay magaalada diridhabe oo bilaabay salaadii subax ka dib ilaa xalay fiidkiinba socoday.
Dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in saaka kaniisad ay ku dhuumanayeen dadka oromada ahi laga helay meydadka 8 qof oo somali ah oo ay si xun u dileen oromadu.
Weli waxa ka socda magaalada jigjiga wadahadaladi u dhexeeyay xukumada federalka itoobiya iyo madaxweynaha ismaamulka somalida oo aan ilaa hada wax natiifjo ah laga gaadhin sidii loo soo afjarilahaa colaada ka dhalatay isfahanwaaga dhexmaray labada xukuumadood.